admin, Author at MDY Online Knowledge - Page2of 70
ခင်ပွန်းကို ခွေးကဲ့သို့ခေါ်ဆောင်ကာလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ အမျိုူးသမီးရဲ့အကြံအစည်
ခင်ပွန်းကို ခွေးကဲ့သို့ခေါ်ဆောင်ကာလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ အမျိုူးသမီးရဲ့အကြံအစည် ကနေဒါနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းကိုလည်ပင်းမှာ ခွေးလည်ပတ်ပတ်ပြီး ကြိုးနဲ့ဆွဲကာ လမ်းမပေါ်ကိုထွက်ပြီး လမ်းသလားနေခဲ့ပါတယ်။သူမကို သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကကိုဗစ်ကာဖျူးကို ဖောက်ဖျက်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး ဖမ်းဆီးကာ ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ အဲဒီအမျိုးသမီးက ဥပဒေကိုလက်တစ်လုံးခြားလုပ်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့တာပါ။ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ Quebec နယ်မြေမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် ညမထွက်ရအမိန့်ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက် စနေနေ့က ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ည(၈)နာရီကနေ မနက်(၅)နာရီအတွင်း ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့ မိမိနေအိမ်ကနေ အပြင်ထွက်ခွင့် …
ယောကျာ်းသားတွေမရှိ မိန်းမသားတွေသာ နေထိုင်တဲ့ရွာ
ယောကျာ်းသားတွေမရှိ မိန်းမသားတွေသာ နေထိုင်တဲ့ရွာ 1. မိန်းမသားတွေဘဲနေထိုင်တဲ့ရွာလေးကို Tiktok အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ @themelomoon က video ရိုက်ပြီး social media ပေါ်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။Kenya နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Umoja ဆိုတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာဟာ ယောက်ျားသားတွေ တစ်ယောက်လေးမျှမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီရွာလေးက အမျိုးသမီးတွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းကင်းခိုလုံနိုင်တဲ့ သီးသန့်နေရာလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ Rebecca Lolosolu ဆိုတဲ့ …
မတော်တဆခွဲလိုက်မိတဲ့ပန်းအိုးထဲမှာ အဖေ့ရဲ့လျှို့ဝှက်စုဆောင်းငွေတွေနဲ့ ပြည့်နေတာကို အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
မတော်တဆခွဲလိုက်မိတဲ့ပန်းအိုးထဲမှာ အဖေ့ရဲ့လျှို့ဝှက်စုဆောင်းငွေတွေနဲ့ ပြည့်နေတာကို အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့တဲ့ မိန်းက လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့ အခြားတစ်ဘက်ခြမ်းမှ လျှို့ဝှက်တဲ့အရာများစွာ ရှိပါတယ်။တရုတ်ပြည် Guangxi ပြည်နယ် Guilin မြို့က အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံတစ်စုံအတွက် မမြင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အလှပန်းအိုးတစ်လုံးဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းက ဇနီးဖြစ်သူဟာ အစပိုင်းတော့ ဧည့်ခန်းမှ အလှအိုးကွဲသွားတာကို နည်းနည်းလေးမှတောင် မလန့်သွားခဲ့ပါဘူး။ကွဲသွားတဲ့အိုးကို သွားကြည့်တော့ ဧည့်ခန်းမှာ အကြောဆန့်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူက အိုးကွဲသွားတာမှန်ကြောင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းက …
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံရိပ်များ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံရိပ်များ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတာ သိပ်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟိုးပိစိလေးကတည်းက အမြဲတမ်းလက်ပွန်းတတီးနေကာ မွေးမြူထားရတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ သေဆုံးချိန်တွေဆို တစ်အိမ်သားလုံး မျက်ရည်ကျရတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီလိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ Ross Taylor ဟာ ဖလော်ရီဒါ၊ Tampa bay ဒေသတစ်ဝှက်မှာရှိတဲ့ အိမ်တွေကိုလိုက်ပြီး အိမ်မွေးခွေးလေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေဖို့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ …
မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်ကာလ ဆွမ်းခံ ပြန်လည်ကြွနေတဲ့ သံဃာတော်များရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ် ပုံရိပ်များ
မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်ကာလ ဆွမ်းခံ ပြန်လည်ကြွနေတဲ့ သံဃာတော်များရဲ့ ကြည်ညိုဖွယ် ပုံရိပ်များ မန္တလေးမြို့အတွင်းမှာ ကိုဗစ်ကာလ ဆွမ်းခံရပ်နားထားသည့် သံဃာတော်များ ယခုအခါ ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆွမ်းခံပြန်လည်ကြွရောက်နေတဲ့ ကြည်ညိုဖွယ် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Photos – Htein Htein Lynn …
“သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်များ”
“သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်များ” ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ခေတ်မှီနည်းပညာတွေ နောက်ကို လိုက်နေကြတဲ့ အတွက် အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ ပက်သက်လာရင်သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှပါတယ်နော်။ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် ဗဟုသုတရအောင်ပျားရည်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတိတ်နမိတ်တွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)ဘယ်ဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက ငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂)ညာဘက်လက်၌ ပျားစွဲပါက စီးပွားပျက်တတ်ပါတယ်နော်။ (၃)အိမ်ခေါင်မိုး ထုတ်တန်းမှာ ပျားစွဲပါကစီးပွားပျက်တတ်ပါတယ်။ (၄) ရေအိုး၌ ပျားစွဲပါက သူဌေးဖြစ်မှာပါ။ …
ခြေအိတ်အနံ့ကို နေ့တိုင်းရှုရှိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် အဆုတ်မှာပြင်းထန်တဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား တရုတ်နိုင်ငံရှိ Peng အမည်ရှိအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အလုပ်ချိန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့တိုင်းလိုလို သူ့ရဲ့ခြေအိတ်အနံ့ကို မွေးလို့ဆိုပြီး ရှုရှိုက်တတ်တဲ့ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့အကျင့်တစ်ခု ရှိနေတာကြောင့် သူဟာ အဆုတ်မှာပြင်းထန်တဲ့ fungal ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ Peng ဟာ ရင်ဘတ်မှာပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးနောက် Fujian မြို့ရှိ Zhangzhou ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်များက ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် Peng ရဲ့အဆုတ်ရောဂါပြင်းထန်စွာခံစားနေရကြောင်း …